Google Captcha အား ReBreakCaptcha ဖြင့်အလိုအလျောက်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း Linux မှ
Google Captcha အား ReBreakCaptcha ဖြင့်အလိုအလျောက်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
spam site များကိုကျူးကျော် ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီ၏လုံခြုံမှုကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးပမ်းခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည့် bot များကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းမှာကြာမြင့်စွာခဲယဉ်းသည်။ ဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးဝင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုကတော့ google captchaအထူးသဖြင့်ဗားရှင်း ReCaptcha V2, pero lamentablemente se ha difundido una vulnerabilidad en esta herramienta que permite resolver las captcha de manera automática.
အောက်ပါသက်သက်သာပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးကိုချိုးဖောက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် ReCaptcha V2 ကို၎င်းမှပေးထားသောအသံရွေးစရာကိုယူခြင်း။ အဆိုပါဆောင်းပါးသည်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသည် နောက်တစ်ခု၎င်းတွင်အားနည်းချက်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီး captchas များကိုအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနိုင်မည့် script တစ်ခုပေးသည်။
1 ReBreakCaptcha ဆိုတာဘာလဲ။
2 ReBreakCaptcha ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ
3 ReBreakCaptcha နှင့်ပတ်သက်ပြီးကောက်ချက်
၎င်းသည်အားနည်းချက်တစ်ခု၏အားသာချက်ကိုယူသောအခမဲ့ application ဖြစ်သည် ReCaptcha V2၊ အတွက် captcha အလိုအလျှောက်ဖြေရှင်းပါဒီအတွက်အလိုအလျောက်စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးသည် ဆယ်လီနီယမ်, အ Google Speech Recognition API နှင့်အမျိုးမျိုးသော algorithms ။
ဤကိရိယာသည်အဆင့်သုံးဆင့်ကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်သည်။ငါစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး«ထို့နောက်ဖြေရှင်းခံရမည့် captcha ထွက်သောအခါအသံရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ၊ အသံကိုလက်ခံပြီး၎င်းနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ပါ Google Speech Recognition APIနောက်ဆုံးတွင် Api မှအသိအမှတ်ပြုထားသောနံပါတ်များကိုထည့်။ captcha နေရာတွင်ထည့်ပါ။
Google Speech Recognition Api ဟာထပ်ခါတလဲလဲကျရှုံးနိုင်ပါတယ် နေပြည်တော်သင်မှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းချက်မရမချင်းသင်ဟာအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကိုသုံးသည်။
အသုံးပြုရန် နေပြည်တော် မူရင်း script ကို Windows အတွက်လမ်းကြောင်းများဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Script အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောမှီခိုမှုများကို install လုပ်ရမည်။
sudo pip ကို pydub SpeechRecognition selenium ကို install လုပ်ပါ
ထို့နောက် script ၏ repository ကိုပွားယူရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံတူပွားထားသော desktop သို့သွားပြီး Linux အတွက်သက်ဆိုင်သောလမ်းကြောင်းများနှင့်အတန်းကိုတည်းဖြတ်သည်။
# Firefox / Gecko ယာဉ်မောင်းနှင့်ဆက်စပ်သော FIREFOX_BIN_PATH = r "C: \_ Program Files (x86) \_ Mozilla Firefox \_ firefox.exe" GECKODRIVER_BIN = r "C: \_ geckodriver.exe"
စကားမစပ် Linux မှာ
# Firefox / Gecko ယာဉ်မောင်းနှင့်ဆက်စပ်သော FIREFOX_BIN_PATH = r "/ usr / bin / firefox" GECKODRIVER_BIN = r "/ usr / bin / geckodriver"
သငျသညျကိုသုံးပါတူညီသောလမ်းအတွက် python3ကျေးဇူးပြု၍ အစားထိုးပါ xrange အားဖြင့် range။ script ကိုအသုံးပြုလိုသော URL ကိုလည်းပြုပြင်ရမည်။ဒါကငါတို့ကျမ်းစာကိုဖြေရှင်းစေချင်တာပါ).
နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ပြေးရမယ် နေပြည်တော်၊ ၎င်းသည်ညွှန်ပြထားသော url ကို အသုံးပြု၍ browser ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ပေးပြီး captcha ကိုဖြေရှင်းရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
ဤ script သည်လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းကိုတိုးတက်စေရန်ရိုးရိုးအဆင့်များဖြင့် python တွင်သုံးရန်အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။ ရပ်ရွာလူထုအနေဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအားနည်းချက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
အားနည်းချက်သည်ယခုအချိန်ထိတက်ကြွနေသဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုအကြံပြုသည် ReCaptcha V2 ကို သင်၏လုံခြုံရေးကိုအခြားကိရိယာများ၊ အထူးသဖြင့် captchas များကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည့် IP detect ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Google Captcha အား ReBreakCaptcha ဖြင့်အလိုအလျောက်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း
ကောင်းသော Lizard ကို,
မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မူရင်းချည်ကိုဖတ်ပြီးသော်လည်း https://east-ee.com/ hit rate သည်မှတ်သားလောက်ဖွယ်ကောင်းပုံမပေါ်သော်လည်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးအချိုးအစားတွင်အလွယ်ကူဆုံး captchas များကိုသာဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုထောက်ပြသည်။
အမှန်မှာ၊ hit နှုန်းသည်နိမ့်ကျသည် (စမ်းသပ်မှုများတွင် ၇ ခုအနက် ၁ ခုမှ ၁ ခုကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်) သို့သော်အားနည်းချက်များရှိနေပြီးဤအညွှန်းအချိုးများမြင့်တက်လာရန်အတွက် tool ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
အစ်ကိုတစ်ယောက်ကအဲဒါကို ၀ င်းဒိုးတွေထဲဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်မျှဝေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်နောက်မှကစားရန်ဘုတ်အဖွဲ့မှတိုက်ရိုက်။ Python မှာရှိတာမို့သင့်ရဲ့အားသာချက်ကိုယူရမယ်။
wilber Antonio ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆောင်းပါးအတွက်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ငါ့ကိုပြတင်းပေါက်များအတွက် scrypt ပို့ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးချင်ပါတယ်, ငါဘယ်နေရာမှာမတွေ့ရသောကြောင့်, သင်၏အချိန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
wilber antonio အားပြန်ကြားပါ
ဒါဟာ capcha ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ ငါ့ကိုဒီသတိပေးမှုကိုပို့ပေးတယ်
RuntimeWarning - ffmpeg သို့မဟုတ် avconv ကိုရှာ။ မတွေ့ပါ။ ffmpeg အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
warn ("ffmpeg သို့မဟုတ် avconv ကိုရှာ။ မရပါ - ffmpeg သည်ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်သည်"), RuntimeWarning
angelis ဇာ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာမှတ်ပုံတင်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် RECAPTCHA နဲ့မချိတ်ဆက်နိုင်ရင် ၀ င်တဲ့အခါတစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မှာပါ။
Jesus Ramos ကိုပြန်ပြောပါ
နှင့် download link ကို?
Jose fernandez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် capchat အတွက်လျှောက်လွှာကိုရှာနေပါတယ်
jose fernandez အားစာပြန်ပါ
ana z ။ တောင်စောင်း v ။ ဟုသူကပြောသည်
ငါလိုချင်တာက captcha ကိုသွားချင်တယ်၊ ဖွင့်တယ်။ သူတို့ကိုငါမသွားဘူး၊ သူတို့မဖွင့်ဘူး
ana z အားစာပို့ပါ။ တောင်စောင်း v ။
iraida quiroz ဟုသူကပြောသည်
ငါ RECAPTCHA ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ
iraida quiroz အားပြန်ပြောပါ
အသံကိုသင်အကြိမ်ကြိမ်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည့်အခါ Try Again ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်ပုံရိပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေသော GoodByeCaptcha ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
fkill-cli နှင့် Linux တွင်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလွယ်တကူသတ်ပစ်နိုင်သည်